09.05.2020 Category: بدون مقوله
Everchọtụla malite blọgụ nke gị؟ ما ọ bụ ، در حال حاضر وبلاگ نوا ị na-ejighi n’aka etu a ga-esi ruo wakwa nke ọzọ?
Ọ bụrụ na azịza gị bụ "هه" mgbe ahụ peeji a bụ ebe ị kwesịrị ịdị.
0.0.1 N’ime ntuziaka ịde blọgụ، a ga-amụta:
0.0.2 جینی کپارا ndu a؟ مطمئن باشه گباسارا onwe m
1 ISI nke 1. tingtinglite Blog na Scratch
1.1 1. Họrọ ezigbo میزبان وب na aha ngalaba
1.1.1 Aha ngalaba – Ebee debanye آها?
1.1.2 Bochum Weebụ – Ebee ka ga-esi wezie Blog gị
1.1.3 Akvadoro Blog nke akwadoro maka Newbies
1.2 2. Gosiputa ngalaba DNS هیچ یک از وب gịnị نیست
1.3 3. Wụnye WordPress na web host gị
1.3.1 وردپرس Ntinye akwụkwọ ntuziaka
1.3.2 Wụnye WordPress Otu Pịa
1.4 4. Chọta Peji WordPress Admin gị ma banye
1.5.1 مارا گوربورگورو
1.5.2 ایه ایه ای امه
1.5.3 Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ وبلاگ kachasị mma
2.1 Otu esi ahọrọ طاقچه ịde blọgụ ziri ezi?
2.1.3 3. Isiokwu nwere ike ịnọgigide
2.1.4 4. اروو
3 Isi nke ise 5. وبلاگ Growtọ
3.3 3. وبلاگ Gbalịa mee ka gị dị mfe ọgụgụ
3.4 4. وبلاگ Ikwu
3.5 5- سکوی Ajụj س&آ
4.3 عکس عکس در عکس Onwere Onwe
4.4 نتوزیاکا & نیوشا
4.5 رسانه های اجتماعی ، Ahịa & سئو
4.6 Nchịkọta Ntanetị & نراپتا وبی
N’ime ntuziaka ịde blọgụ، a ga-amụta:
جینی کپارا ndu a؟ مطمئن باشه گباسارا onwe m
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR) na 2008، na ekele akụkụ nke nnabata nnabata ịde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ، WHSR etolitela Ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị، ma adọtala m ka ha mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile azụrụla ntinime aka ، na-eme ọ bụ ihe a ga-eji nweta onye ọ bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
سایت na ntuziaka enweghị nzuzu a، m ga – ewetara gị ụfọdụ ngwa ngwa، nghọta dị mfe nghọta na karịa ụzọ dị mma maka nsogbu ịde blọgụ gị – sitere na ahụmịhe nke m na n’uche na eme na mm.
ode akwụkwọ profaịlụ na Problogger.net – M na-ebipụta oge niile na ọtụtụ saịtị ndu بلاگر dị elu n’etiti 2015 – 2018.
ISI nke 1. tingtinglite Blog na Scratch
dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ịmalite blọgụ na 2020.
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu، WordPress.org، bụ n’efu. achkacha amara emepe emepe em WordPress na plugin bụ n’efu. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalite gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ ịmalite blọọgụ bụ ego ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
ای doro anya ، ọ nwere ike nweta oke aghụghọ na emesịa ogbo؛ mana n’totu mgbe، ọde blọgụ nwere ike ime onye ọ bụla nwere kọmputa na Internetntanetị. N’ezie ị nwere ike ịmepụta blog n’ezie ma mee ka ọ na-agba ọsọ na nkeji 20 na-esote. Nzọụkwụ ndị a kpọtụrụ aha na usoro ndị a bụ kpọmkwem otu m si emepụta blọọgụ m na mbido.
Họrọ ezigbo میزبان وب na aha ngalaba
Gosipụta ngalaba ngalaba DNS na onye na – elektrọta weebụ gị
Wụnye WordPress na میزبان وب gị ụụhụụ (dị mfe iji ihe nrụnye akpaaka).
Banye na WordPress gi ma ma bipute post mbu gi.
ما … nke ahụ niile.
Easyda mfe؟ شرط بندی nzọ!
M ga-eje ije gị n’okpuru ebe a. Na-eche رایگان iji ọ bụrụ na ị marala etu esi ahazi blog nke gị.
1. Họrọ ezigbo میزبان وب na aha ngalaba
وبلاگ Iji bido gbara onwe gị، a ga-ebu ụzọ chọọ ngalaba aha na akaụntụ nnabata وب.
Ngalaba gị bụ aha blog gị. Ọ bụghị ihe anụ ahụ ị nwere ike imetụ ma ọ bụ hụ؛ kama ọ bụ ụdị mkpụrụedemede na-enye weebụsaịtị gị aka atamata – dị ka aha akwụkwọ ma ọ bụ ebe. Ngalaba gị na – agwa ‘ndị ịbịa ụdị blog ha na – eleta.
Nlekọta weebụ، n’aka nke zọ، bụ ebe ị na-echekwa blogdịnaya blog gị – okwu، blog isiokwu، onyonyo، vidiyo، na ndị ịzọ.
Aha ngalaba – Ebee debanye آها?
شما nwere ike ịhọrọ ma denye aha ngalaba gị site na ngalaba na-edeba aha. GoDaddy، AhaCheap، Hover، na Domain.com bụ ọfọdụ n’ime ndị na – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Rịba ama na ọ dị mkpa ịdebanye aha ngalaba na onye na-elektrọta weebụ gị. Naanị n’ihi na onye na-ọlekọta weebụ gị na-enye ngalaba n’efu anaghị apụta na ị kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ Bochum na-achịkwa aha ngalaba gị. Onwe m، ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m؛ mana ndị ọzọ na-edeba aha ngalaba aha kwesịrị ịdị mma. سایت n’ime nke a، enwere m ike ịgbanwe ngalaba ngalaba DNS m oge ọ bụla achọrọ m ma zere ịbụ onye akpọchiri m otu میزبان وب otu. آنا m akwadosi gị ike ime otu ihe ahụ maka nchebe gị.
Bochum Weebụ – Ebee ka ga-esi wezie Blog gị
Banyere ntanetị weebụ، lelee nke m họta weebụ kachasị mma na ndebanye nyocha nyocha.
Maka ndị mbido، m na-akwado ịmalite obere na onye ọbịa weebụ na-ekerịta.
Na ntinye nnabata – Ọ bụ ezie na nchịkwa nnabata dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ (VPS، igwe ojii، wdg)، ị ga-achọ obere ego (oge <$ 5 / mo na ndebanye) na ihe ọmụma ọrụ iji malite. Mgbe ị na-ahọrọ onye ọbịa weebụ maka blog gị، ihe ndị a bụ ihe ise ga-echebara echiche:
pụrụ abdabere – Blọọgụ gị kwesịrị iguzosi ike ma dị n’ịntanetị 24 × 7.
سرعت – needchọrọ onye nnabata nke na – ebu ngwa ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
yenye ọnụahịa – بوخوم NA <$ 5 / mo bu ezigbo mmalite، ichoghi oru ego di elu na ogbo a.
Ime ụlọ na-eto – will ga – achọ nkwalite ndị ịbịa (atụmatụ ndị ọzọ، ikike sava ndị ọzọ، wdg) ka blọọgụ gị na – eto.
nkwado – Thentanetị na-agbanwe agbanwe mgbe niile، ọ dị mma mgbe niile ịnwe onye nyere gị nkwado n’akụkụ ụrụaka.
Akvadoro Blog nke akwadoro maka Newbies
Nlekọta blọọgụ abụọ na InMotion Bochum maka 3.99 دلار در ماه.
Alele bụ otu n’ime میزبان وب dị ọnụ ala karịa، ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ụbụ ụlọ rụ Bochum mmefu ego، Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ 3.95 $ / وبلاگ ماکارا وب سایت خود را.
نرم افزار NDỤMỌDỤ: Maka na onye na – ahụ maka weebụ na – ewu ewu، apụtaghị na ọ kachasị mma maka blog gị. Lelee arụmọrụ ọbịa ma lelee nke ọma tupu ime mkpebi.
2. Gosiputa ngalaba DNS هیچ یک از وب gịnị نیست
ọzọ، ịkwesịrị imelite ndekọ DNS na ngalaba aha na-edeba aha (ebe ị debanyere aha ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) na-arụtụ aka na sava weebụ gị (InMotion Hosting، Hostinger ma ọ bụ SiteGround).
DNS guzoro na ngalaba Aha Sistem ma a-eji ya eduzi onye ọrụ ụ bụla na-abata kwupụta adreesị IP nke sava ahụ. Yabụ، mgbe onye ụrụ batara “WebHostingSecretRevealed.net” ihe ndekọ DNS ga-ebugote adreesị IP nke onye web m ma jeere onye ụrụ m saịtị ahụ.
Ihe Nlereanya: Itinye aka na websaịtị na InMotion Hostingerer na GoDaddy.
Nke a bt ntuziaka usoro maka iji melite blog blog gị na GoDaddy or Namecheap.
3. Wụnye WordPress na web host gị
Iji malite ụde blọgụ سایت na iji WordPress ị ga-ebu ụzọ wụnye sistemụ ahụ n’ime onye na-elektọta weebụ g. Enwere ike iji nke ae mee nke a، ma ọ bụ iji ngwa nwụnye otu ngwa-ngwa. Methodszọ abụọ a dị mfe nfe ma enwere ike ịme ya ngwa ngwa.
وردپرس Ntinye akwụkwọ ntuziaka
Na ngwa ngwa، ebe a bụ usoro wkwesiri me:
وردپرس و کامپیوتر وردپرس را با استفاده از برنامه nbudata تغییر دهید.
Mepụta nchekwa maka data WordPress na sava weebụ gị، yana onye ọrụ MySQL nke nwere ihe hegwù niile maka wnweta ma gbanwee ya.
Mepee wp-config.php na ederede ederede (دفترچه یادداشت) ma jupụta nkọwa data nchekwa data gị.
Gbaa akwụkwọ edemede WordPress ahụ site na wnweta wp-admin / install.php na ihe nchọgharị weebụ gị. Ọ bụrụ na ị wụnye WordPress na ndekọ ndekọ، a ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php؛ ọ bụrụ na i tinyere WordPress na na onwe ya na-akpọ blog، dịka mụmaatụ، a ga-aga: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Wụnye WordPress Otu Pịa
tụtụ ndị na-ede blọgụ n’oge a anaghị etinye aka WordPress ha.
سایت na nkwado nke ụrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Place (ọ dabere na nke web host ị na-eji)، usoro nrụnye dị ezi n’iru ma enwere ike ịme ya na ole na ole dị mfe.
Maka ntụaka gị، ihe onyonyo ndị a na-egosi ebe ị nwere ike ịchọta njikwa nwụnye akpaaka gị داشبورد. Iji wụnye WordPress، dị nnọọ pịa akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – sistemụ WordPress gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
Ihe Nlereanya: می توانید n WordPress را فشار دهید ، می توانید از طریق ایمیل و الکترونیکی کار کنید ، اما نمی توانید آن را نصب کنید؟ نصب کننده خودکار نصب کننده میزبان (ia na Hostinger ebe a).
Ihe nwere ike ịdị iche maka ndị web na-ahụ maka weebụ mana usoro a bụ otu. بله ، فقط ناتلا ، من بری و من ، جی جی اوتو آدی آقا و یک مأن و گوسی ن.
Onwe m eche na WordPress bụ usoro ịde blọgụ kachasị mma maka newbies. Dabere na ụnụ ọgụgụ sitere na Wuru Na، ihe kariri 95٪ nke blọọgụ na United States ka eji wulite WordPress. N’ụwa niile، ọ fọrọ nke nta Nde blọọgụ 27 na-agba na WordPress.
4. Chọta Peji WordPress Admin gị ma banye
وردپرس ، سیستم عامل وردپرس ، یک آدرس اینترنتی را برای دسترسی به سایت های WordPress ، ایجاد کنید. N’ọtụtụ oge، URL ahụ ga – abụ ihe dị ka nke a (ọ dabere na folda ị wụnyere na WordPress):
Gaa URL ae banye aha njirimara na paswọọdụ gị site n’ebe ahụ، a ga-anọ ugbua na njedebe (داشبورد) nke saịtị WordPress gị – nke a b blog akụkụ nke blog ebe naanị gị dịka onye nchịkwa nwere ike.
وبلاگ Mepụta ọhọrụ na WordPress Gutenberg ọhụrụ.
WordPressdị WordPress kachasị ọhụrụ nụoge edede bụ ụdị 5.3.2 – na ndabara ka ị ga-eji WordPress Gutenberg dị ka onye edemede ederede. Gutenberg na-eweta mgbanwe dị ukwuu na nyiwe WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ọkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka na njikwa okirikiri ederede.
Iji de ma bipụta ọkwá ọhụrụ، gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe، p’a ‘Posts’> ‘Tinye Nkọwa’ na ị ga-eduzi na ngere ederede. Pịa ‘Preview’ ka ị hụcha ihe ihe dị na njedebe (ihe ndị na-agụ gị ga-ahụ)، pịa ‘Bipụta’ ozugbo oge zuru ezu.
هلا! اکنون bipụtara akwụkwọ وبلاگ mbụ gị.
Nke a bụ ebe ị nwere ike ịnweta isiokwu WordPress n’efu. Ederede edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke ndị mmepe WordPress nyere، ya mere، n’echiche m، nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
ọzọ ọzọ ị ga-esi nweta isiokwu dị elu nke a na-akwụ ụgwọ bụ yedenye aha na Clubs Clubs WordPress.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị nụrụ banyere klọb Okwu egwuregwu، lee ka o si arụ ụrụ: You na-akwụ ego ole iji sonyere klọb ahụ، ị na-enwetakwa atụmatụ dị iche iche enyere na klb موضوع na-ahazi usoro ngosi enyere na klọbgụ موضوع.
mara Gburugburu، Studio Press، na Ihe eji eme ihe bụ atọ WordPress Gburugburu klọb m nwere ike ikwu.
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ nọ n’ebe ahụ – ụfọdụ klọb na-ebute otu ụlọ rụ dị iche iche، dị ka ndị ezigbo ụlọ ahịa ma ọ bụ ọlọ akwụkwọ؛ ma anyị ga-ekpuchi atọ n’ime isiokwu a.
Mara Gburugburu Gburugburu – Karịrị 80 adịgboroja WordPress gburugburu، pịa ebe a iji lee onodu okwu mbu.
Gaa na: StudioPress.com. Ahịa: 129.95 $ / isiokwu ma ọ b 4 499.95 $ / ndụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress oge، mgbe ahụ، ị nụla banyere StudioPress. Ọ na-ewu ewu maka of Jenesis Framework، ndo حداقلی در SEO-enyi na enyi WordPress kpuchie niile StudioPress gburugburu.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis na isiokwu nwata nwere maka ugwo ugwo nke 59.99 $. Ihe kachasị mkpa، nke gụnyere Igodo Jenesis، na-efu 99 $ ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta niile gburugburu، ị nwere ike ịkwụ ụgwọ 499 $.
ایه ایه ای امه
Njikere mere saịtị ndị موضوعات صنعتگر nyere.
متاکووو: Ndị a bụ ụtụtụ ihe ndị ọzọ dị mfe ị ga – eme iji chebe blog WordPress gị
Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ وبلاگ kachasị mma
وبلاگ bịa na njikarịcha arụmọrụ. W3 حافظه نهان Total na Nrụ ụrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachasị ewu Ewu.
Ihe mgbakwunye arụmọrụ abụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe wekụ، na WP Super Cache. Clare Flare bụ ngwa mgbakwunye nke ọlọ ụrụ CDN nyere، Cloud Flare؛ ebe WP Super cache mepụtara site na Donncha na Automattic، ọlọ rụ mepụtara ma na-arụ rụ WordPress ugbu a.
Ihe mgbakwunye mkpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa de blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ، belata oge udsepp.
Ọ bụrụ na blọọgụ gị nwere ọtụtụ onyonyo dị na ya – tulee itinye EWWW بهینه ساز تصویر. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta ihe eserese onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri aka na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. سایت na iji eserese kachasị mma، ị nwere ike belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
متاکووو: SEO 101 maka ndị na-ede blọgụ mbụ
سایت na ntinye nke Gutenberg nchịkọta akụkọ na WordPress 5.0، ndị na-ede blọgụ nwere ike ịmepụta ọdịnaya ugbu یک سایت na iji nchịkọta akụkọ na-egbochi ngọngọ. سایت na ndabara، WordPress na-enye setịpụrụ ngọngọ ọdịnaya dịka paragraf، eserese، bọtịnụ ịkpọ oku na-eme، koodu mkpirisi، na ndị ọzọ. سایت na ịgbakwunye na پلاگین ها Gutenberg، a ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (dịka mụmaatụ – سؤالات متداول ، آکاردئون ، profalụ edemede ، چرخ فلک ، توییت ، بلوک های GIF ، wdg) na blog g.
Stackable، Ultimate Blocks، CoBlocks ihe atọ dị mfe na Gutenberg Block plugin na-akwụghị ụgwọ wnwale.
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na Mọnde، ihe omume ntụrụndụ na Tuesday، fim ha lere na Wednesday، na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwụsị izu. Na nkenke ، ndị a na-ede ederede na isiokwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bụla.
Ee، blọọgụ ndị a ga-ejikọta ọnụ n’etiti ndị enyi na ezinụlọ ha؛ ma nke ahụ bụ maka ya.
O siri ike inwe ọnụ gụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrụ na ị na nk ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa kpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị b. وبلاگ Iji wuo na-aga nke ọma، nkwesịrị ịchọta طاقچه.
Otu esi ahọrọ طاقچه ịde blọgụ ziri ezi?
Iji chọta nging ịde blọgụ ziri ezi، ebe a bụ isi ihe ị ga-atụle.
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị اینجا "M ga-achọ ka mmadụ dee blog banyere ya", nke ahụ bụ oge a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere، mgbe ahụ، ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Kedu ihe ọmụma gị pụrụ iche؟ Kedu ka ị ga – esi nye ihe dị iche iche na isiokwu nke onye ọ bụla ọzọ nwere ike ime؟ O nwedịrị ike ịbụ site na mkparịta ụka gị na ọkachamara.
Omumaatu: Gina nke blog، Na-ekpuchi ezughị okè، na-elektrwasị anya n’inyere ndị nne aka ịzụlite ụmụ nwere mkpa pụrụ iche.
Cheta na ị ga-ede akwụkwọ، ịgụ ma na-ekwurịta okwu gị kwa ụbọchị maka afọ ole na ole sochirinụ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na isiokwu blog gị، ọ ga-esiri gị ike ijisi gburugburu mgbe niile.
ọzọkwa ، ị ga-enwe mmasị ide ihe ndị ahụ.
3. Isiokwu nwere ike ịnọgigide
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu، ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ụmụmaatụ، ọ bụrụ na ị nwere nnọọ mmasị na Vine ma malite na blog dabere na ya، mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ịdịnaya. Ọ ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu، dịka "ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a، ọ bụrụ na ụda daa na ejiji، blog gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta ego – ma ọ bụ site na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị، blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ؟ Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na ị nwere mmasị na isiokwu ahụ، enwere ụzọ ị ga-esi tinye blog nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu، ngwa mgbasa ozi nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ، iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Echiche m n’azụ nke a – ụ bụrụ na ndị mgbasa ozi na-akwụ puku kwuru puku دلار در Google Adwords ، a ga-enwerịrị ego ị ga-eme n’ubi a. لی ihe atụ abụọ m chọtara:
Ihe Nlereanya شماره 1: Nke a bụ stats mgbasa ozi maka onye na-emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). ọlọ ụrụ a na-etinye ihe karịrị 100،000 $ kwa ọnwa na Adwords dị ka Spyfu.
Ihe Nlereanya شماره 2: Nke a bụ mgbasa ozi mgbasa ozi maka onye na-eweta ngwanrọ IT. E nwere 20 ndị ọzọ nnukwu egwuregwu na niche a. ọlọ ụrụ a، karịsịa، mgbasa ozi azụtara na mkpokọta 3،846 na Google ma jiri ihe dị ka 60،000 $ kwa wanwa.
متاکووو: Otu esi ede ma ọ dịkarịa ala otu nnukwu ọdịnaya n’otu izu ugboro ugboro
Isi nke ise 5. وبلاگ Growtọ
Eziokwu dị mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ werela ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ ha. گرفتن nweta nyocha puku peeji mbụ ha nwere ike were ọnwa، ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Ndị a bụ atụmatụ ọzọ ihe ise ga-enyere gị aka iwere blọgụ gị site na nlele peeji 1 ruo 1،000.
Ndị mmadụ na-eriju afọ na mmelite mgbasa ozi nke mgbasa ozi، ndepụta ozi ọma، ozi anntanetị، na ụdị mgbasa ozi dị iche iche. Ọ na-esikwu ike ime ka ndị mmadụ gụọ ịdịnaya gị. Agbanyeghị، ị ka nwere ike ịme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara onye bụ ndị na – ege gị ntị bụ na ihe ha na – achọ. Che echiche banyere oghere dị na niche gị، ịdị ọdịnaya adịghị efu na otu a ga – esi weta ndị na – ege gị ntị uru.
Jiri ngwaọrụ mgbasa ozi na-elektrọta mmadụ iji soro ihe na-aga nke nama na رسانه های اجتماعی. N’ebe dị otú a، ị nwere ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Jiri ngwaọrụ ọdịnaya dịka Zaa Ọha ịchọrọ maka ajụjụ ndị ama ama ndị mmadụ na-ajụ na Google.
پست های Kwesịrị ịkekọrịta gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara na niche gị، debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche، ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ibe ha oge niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke a ga – enyere aka ọgụgụ gị na itinye aka gị.
Nyere aka na mmemme توییتر. Ikwu na nzaghachi ndi otu ndi ozo. Kekọrịta ederede na akwụkwọ akụkọ gị. Gbakọọ ma kwụghachi gwọ blọọgụ ị hụrụ n’anya سایت na ịgosipụta otu izu ma ọ bụ wanwa.
Jụọ otú a ga-esi nyere onye ọzọ aka ma ọ bụ site n’inye ndị ọbịa akwụkwọ ozi. Na-ere ngwaahịa ha، jiri njikọ ha mmekọ، kwalite njikọ ha na mgbasa ozi gị mgbe ị na-edecha ha. Dịka ohere iji weghachite ndị na-ede blọgụ، ndị na-ede blọgụ a ga-echeta enyemaka gị ma kpọọ gị ka ị bịa.
3. وبلاگ Gbalịa mee ka gị dị mfe ọgụgụ
Ọ na-ewe m iwe mgbe m chọtara blog nwere isiokwu enwere m obi anụrị naanị ịchọta ọdịnaya ahụ na nnukwu ederede، paragraf ole na ole، enweghị isi ma ọ bụ mgbọ na obere mkpụrụ okwu Nke ahụ na-achụpụ m.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu، blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. کاما ، nwayọ gosi ndị na – agụ ya ihe ha dere. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee Ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
وبلاگ Ebuli gị site na iji isi، sub-isi، isi mgbu، ma ọ bụ ndepụta edepụtara. Nke a na-enyere ọdịnaya gị aka ịhazi ka aazaziri nke ọma.
Kewaa blog gị na ngalaba ma ọ bọ paragraf. Mgbidi ederede nwere ike iyi ihe na-emenye ụjọ ma na-eju ndị na-agụ ya anya.
Zere iji mkpụrụ edemede mara mma. Nọgidesie ike na mkpụrụedemede nchekwa weebụ dịka Arial، Georgia، Times، wdg.
4. وبلاگ Ikwu
Gbanyụọ، ịza ajụjụ na blọọgụ bụ ọzọ kacha eleghara anya maka ewu okporo ọzọ blog – nke kachasị n’ihi na ndị mmadụ na-ackụ ime ka nnabata، mkparịta ụka bara uru na ndị bịara abịa (m) Agbanyeghị، ịza ajụjụ banyere blọọgụ bụ ụzọ dị mma maka ewu okporo ụzọ na-adịkwa n’efu – enweghị ike ịgbagha nke ahụ!
Dee ezigbo nkọwa mgbe niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe bara uru ị gbakwunye na mkparịta ụka ahụ، ahapụla ikwu (“Daalụ – post nnukwu” … ha abaghị uru)
Naanị dobe njikọ ebe dabara adaba. Achọgharịla spam، n’agbanyeghị ịdị ọnwale ọ nwere ike ịbụ؛ ga-agbakwasị gị.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla edo، ikekwe)، ọ bụrụ na ị hapụ njikọ، enyela URL nke blog gị. Kama nke ahụ، jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. ارتباط bụ isi ebe a.
5- سکوی Ajụj س&آ
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị nwere mmasị، nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na niche gị ka ị wee chime mgbe ị nwere ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị، ọ bụghị post ọ bụla ga – abụ ohered – mana ụ – ام) Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ، dị ka Feedly، iji rụọ ụrụ a.
Mepụta ụfọdụ ọdịnaya omenala metụtara mkparịta ụka na-ekpo ọkụ. Dịka ụmụmaatụ، ọ bụrụ na mmadụ ajụọ otu esi eme koodu .htaccess koodu، ị nwere ike idea nkuzi wee zipu ya na blọọgụ gị – mgbe ahụ، na ngalaba Q&nke saịtị ahụ، zaa onye chọrọ ya na teaser، jikọ ha na blọọgụ gị. iji nweta koodu na demos zuru ezu. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na otu onye jụrụ ajụjụ ahụ، ndị ọzọ nwere otu ajụjụ ahụ – azịza na njikọta okwu gị ga-aga n’ihu na-adụ ha ọdụ ma oge ahụ bịara.
N’ihe banyere usoro Q&iji mee ihe، m na-akwado
Quora ، Klout ، na Yahoo! Azịza – ndị a bụ ọzọ atọ kachasị mma nke ikpo okwu Q&آ
مشاور Tripad – Maka ndị na – ede blọgụ njem
متاکووو: Choo uzo ozo iji tinye mon blog، gi wee gụpụta nke Kevin Muldoon Ọmụmụ ikpe na-ere BloggingTips.com maka 60،000 $.
N’agbanyeghi na akụrụngwa na arụ ụrụ weebụ bara uru na ntanetị، nsogbu a na – akpọlite ​​ha n’etiti usoro ndị ọzọ niile ma ọ bụ / na ihe mgbe ochie.
Dika onyinye nke nkpu maka iguta akwukwo m rue ebe a، aga m enye gi ndepụta nke oru efu ndi anyi ji eme ihe n’oge nile na WHSR. Enwere m obi ụtọ، m ga-achọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma na njem ịde blọgụ gị.
Mgbe Emechara – nga n’ihu na ụtọ asụsụ.
گرامرلی – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
برنامه همینگوی – Jiri ngwa a de mkpirikpi na nkwuwa okwuu.
Nnwere onwe.to – Gbochie ebe nrụọrụ weebụ na-adọpụ uche ka ị nwee ike lekwasị anya n’tide ederede.
SiteWord – Ngwá ụrụ ederede n’efu.
Fotor – Dezie ma chepụta ngwa ọmarịcha ihe osise maka mgbasa ozi mgbasa ozi، akwụkwọ mmado، akwụkwọ ịkpọ oku wdg
achkachamara Ọtọ – Mepụta ihe osise mara mma site na iji ndebiri n’efu na ihe osise emere.
نمودار نمک – Mfe okike ihe omuma.
پیکسلر – Ntanetị ederede.
Favicon.io – Onye kachasị eweta favicon jenerato، mgbe ọ bụla.
عکس عکس در عکس Onwere Onwe
Faili Morgule – Ihe kariri onyonyo 350،000 maka iji azụmaahịa.
نتوزیاکا & نیوشا
Akwụkwọ Eziokwu nke Ụwa – Enweghị ochi egwu – ozi wawa Ozugbo sitere na CIA.
جمهوری فنی – Akwụkwọ ọcha، akụkọ، yana ọmụmụ gbasara teknụzụ.
بازاریابی شرپا – Akụkọ azụmaahịa na – akwụghị ụgwọ.
ọlọ ahịa ahịa – Akwụkwọ na – akwụghị ọgwọ، akwụkwọ ọcha، na ọmụmụ ihe.
ịdị hagha – Chọta isiokwu na – ekpo ọkụ kacha ọhụrụ na BuzzFeed.
Ihe okike ide ihe – Echiche na kpaliri iji merie ederede mgbochi.
Alerts Google – Nweta ozi ịntanetị dị njikere na ọdịnaya ọhụrụ ị na-achọ.
رسانه های اجتماعی ، Ahịa & سئو
Ngwá ụrụ Weebụ Bing – Ngwá ọrụ nyocha saịtị n’efu nke بینگ.
Ngwá ụrụ Webmaster Google – Ngwá ọrụ nyocha saịtị n’efu nke Google.
سورو – Stalk ndị asọmpi gị
Na-aga Bay -Azụ ahịa ، Ire & ngwa ọrụ akpaaka
Ochichi ndi ozo di otua – Lelee maka peeji ndị gbagoro na blọọgụ gị.
Deck Deck – داشبورد n’otu توییتر را دنبال کنید.
صفحه Kọlọtọ – Nnyocha ahịa ahịa mgbasa ozi.
Nchịkọta Ntanetị & نراپتا وبی
Google Analytics – stats web n’efu.
Nchịkọta YouTube – آمار na vidiyo YouTube gị.
WP آمار – وبلاگ Tụlee WordPress gị na ndị ọzọ.
ọzọ nhazi – Usoro dị mfe na nhazi njikwa ọrụ.
Nnyocha Ule – صفحه وب سایت Lelee ọsọ zuru ezu.
GT Metrix – Nwalee ma soro webpage بارگیری.
Ego ole echere ka ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nnabata weebụ dị n’okpuru 100 $ kwa afọ (erughị 10 $ kwa nwa). ụnụ ego a dabere na blọọgụ ejiri aka gị (iji WordPress). Nkwụsị nke ọgwọ ahụ ga-abụ: $ 15 kwa afọ maka aha ngalaba .com na ihe dịka 60 $ kwa afọ maka ego nnabata web.
2. Kedu otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ọgwọ?
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ọgwọ، edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugo ebe nke ọzọ bonyeụmị bụ netwọk nyere.
Mgbe gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na-emekọrịta ihe، ị na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. Inwere ike inweta ego na na:
– mgbasa اوزی مستقیم
– bọọdụ شغل
– Ederede na biputere پستهای nkwado
3. وبلاگ Ka itemalite n’efu?
Enwere ọtụtụ nyiwe ebe ị nwere ike blogmalite blog efu taa، nke a gụnyere WordPress.com، Tumblr ma ọ bụ Blogger. وبلاگ Iji mepụta n’efu، ihe ị ga – eme bụ ebdebanye aha ma ị nwere ike ịmalite ibipụta ọdịnaya gị.
4. جینی بو njigide na azu azu nke ịde blọgụ n’efu?
ای nweghị ihe na-abịa n’efu nụụwa هرị. Enwere ọghọm dị na ọtụtụ ịde blọgụ ntanetị n’efu:
– Aha ngalaba nke blọọgụ gị ka ọ bụrụ subdomain dịka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
– E nwere obere ọrụ، plugins na nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme blọọgụ gị
– blogtụtụ mgbe، ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ iji gbochie blog gị
Ana m atụ aro ka blog blog maleite gị site na iji WordPress.org kwadoro onwe gị (dị ka ihe m kpuchiri na ntuziaka a). E wezụga imeri mmachi nke blog efu، mmụba nke blog gị nwere enweghị njedebe.
ما ، لی ihe gbute azụ:
Aha ngalaba nke blọọgụ gị ga-abụ subdomain dị ka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
Enwere obere ọrụ، plugins na nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme na blog gị
ịtụtụ mgbe، usoro ikpo okwu n’efu na -emechi ohere nke کسب درآمد gị وبلاگ
وردپرس Enwetara ihuenyo Mpempe akwụkwọ Mgbasa Ozi.
Everchọtụla malite blọgụ nke gị؟ ما ọ bụ ، در حال حاضر وبلاگ نوا
Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, već nweela blog ị na-ejighi n’aka
Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? מא ọ ב ụ, כבר בלוג Nweela ị na-ejighi
סטטוס בלוגים פרו – cur Eenean eget ante sit pars vestra Plan Denuo
10 რესურსები იხილეთ უფასო ინფორმაცია Trabaho
Formula Mudah untuk Membantu Anda Menulis Posting Blog Hebat Lebih Cepat
Käyttäjänhallinta MySQL-tietokannassa phpMyAdmin-ohjelmalla
Kako započeti i pokrenuti blog o uspješnom obrazovanju
Jesu li nova proširenja domena budućnost weba?
Sitejet: 6 Tallaabooyin fudud oo lagu dhisayo Verkkosivusto-ka ganacsiga
ഫലപഫലപരദമായ ഫേസഫേസബുകബുകകമാർക മാർകമാർകകറകറളമാർക ളഎകളപുകളുംയൽസൻഷഎക
[Tala faʻatatau] Faʻapefea, és most már elérhető, hogy a BloggingTips.com 60 000 dollárt érjen el.
7 אנשים בלתי רגילים (אך קרירים) ברשת netwerke לבלוגרים עצמאים
Aloittelijan opas: Mikä on Web-hosting? Mikä on verkkotunnus? Ero verkkotunnuksen ja Web-hostingin välillä
ʻO ka Pūnaewele pūnaewele maika’i loa ma 2020 (Κουκουλού ʻia ma nā ʻike maoli a me nā kumu hana)
Seo Pop Sensation Taylor Swift til að skoða þetta blogg með blogginu
ओटु एसि अमलित नृ नारी ना वर्डप्रेस
Disc quam ut setup بهینه سازی میزبان کسب و کار بهینه سازی ایمیل خود را بیابید
Dolazni marketing vs Izlazni marketing za vaše poslovanje
Sitejet: 6 helppoa vaihetta yrityssivuston luomiseen
Wawancara Host Web: CEO WebHostFace, Valentin Sharlanov
בלוג של Kev בלוגים של דומי: יואב פיב טקסי לוב בלוג גן החיות Li Cas xyoo 2020
Πώς να βελτιώσετε το ποσοστό μετατροπής του ιστότοπού σας: Γρήγορες συμβουλές + Μελέτες περιπτώσεων
Sidee looraa daari Taariikhda Google ee Webhely-a WordPress
Λίγο Wikipedia ei osuta teile Veebimajutusest
כיצד ליצור סרטוני מדיה חברתית מדהימים תוך 5 דקות
Sidee Carol Tice u Sameyneysaa Nolol Ay Ka Qaadato Qoraalkeeda Samostalni blog
Ke Kōkua Hoʻomaka: Dia aha ka Pūnaewele Inoa? Dia aha ka Domain? ʻOkoʻa nā ʻokoʻa ma waena o kahi inoa inoa pūnaewele a me ka pūnaewele kikowaena
Intervju stručnjaka: Debbie Bookstaber o tome kako društveno dobro pomaže blogerima
Paranna toimituksellista työnkulkuasi useiden kirjoittajien WordPress-blogeissa
Blogger 30 Συμβουλές στο quam ut Grow Readership Blog
Πώς να δημιουργήσετε συνδέσμους στην εποχή μετά τον πιγκουίνο
Kubhuroga kweDummies: Ungatanga Sei Kubudirira בלוג מונא 2020
Visme Review: Ολοκληρωμένη παρουσίαση / Διάγραμμα / Δημιουργός Infographic
Tlhahlobo ea Litsebi: A Debbie Bookstaber a legfrissebb hírek a legújabb információk megtekintéséhez. Mozgókép a Thusa ba-Bloggerhez
Baineann Foirgneamh Nascanna Cúiseanna 14 le Margaíocht (Gan Sinsearach και Google)
A-til-Z leiðarvísirinn fyrir innlegg innlegg Instagram
6 načina za poticanje više prijava e-pošte na vašem blogu
مقایسه افزونه های 5 صفحه صفحه وردپرس برتر
Η επιτυχία του AccuWebHosting μέσω της ανταπόκρισης του πελάτη
WordPress kennsla: Ahoana no Mamorona Torohevitra Mahaliana Flash Flip
इंदलेला योक्वेंजा इमली एनिंगी उखुलोगोगा: आई-निके इमिबोनो नमसु
Habboon: 13 सुंदर बूटस्ट्रैप सुंदर WP Mawduucyada laga bilaabo अबूर टेम्पलेट
Ulasan dari database MySQL dan phpMyAdmin
Mogu li zapaliti knjige osigurati još jedan stalni tok prihoda blogerima?
Sunt enim Scriptura Sententiis bonum 25 reglur
[Nyochaa] Oletkoko koskaan ollut kacha mma na-eto eto hakkerointi Ngwaọrụ?
چگونگی رفع مشکلات محدودیت حافظه PHP در وردپرس